Real Madrid Oo Gool Muran Dhaliyay Ugu Gudubtay Afar Dhamaadka Champions League, Cabashadii Juventus, Xaqiiqada Rikoodha iyo Farxaddii Ronaldo Ee Garoonka Rogtay
HomeWararka MaantaReal Madrid Oo Gool Muran Dhaliyay Ugu Gudubtay Afar Dhamaadka Champions League, Cabashadii Juventus, Xaqiiqada Rikoodha iyo Farxaddii Ronaldo Ee Garoonka Rogtay
11/04/2018 Abdiwahab Ahmed
Real Madrid ayaa u gudubtay wareegga semi-finalka tartanka Champions League, kaddib markii wakhtigii dheeriga ahaa uu gool rikoodhe ahaa u dhaliyey Ronaldo.
Ciyaartan oo ahayd mid aad u xamaasad badan ayaa wakhti horeba laga dhaliyey Real Madrid saddex gool, kuwaas oo ka dhignaa in isku darka labadii ciyaarood ay barbar dhac noqonayaan, maadaama Real Madrid ay kulankii hore ee garoonka Juventus kusoo badisay 3-0.
Daqiiqaddii 2aad ee ciyaarta ayaa Juventus ay heshay goolka koowaad, waxaana u dhaliyey Mario Mandzukic oo madaxa la helay kubbad uu dhinaca midig kasoo jebiyey Sami Khedira, waxaana markaas bilaabmay in Juventus ay hesho niyad iyo inay la iman karto saddexda gool ee Real Madrid kasoo dhalisay kulankii hore.
Daqiiqaddii 37aad ee qaybta hore ayey mar kale Juventus u dabbaal-degtay gool labaad oo uu mar kale madax ku dhaliyey Mario Mandzukic oo kubbad ka helay Stephan Lichtsteiner oo beddelay kusoo galay, waxaana lagu kala nastay 2-0.
Qaybtii labaad markii lagu soo noqday ayaa uu Zidane soo geliyey Asensio iyo Vazquez, waxaana uu beddelay Bale iyo Casemiro, waxaanay taasi fursad siisay Juventus oo si buuxda gacanta ugu dhigtay khadka dhexe.
Daqiiqaddii 61aad ayaa ay Juventus heshay goolka saddexaad oo ciyaarta barbar dhac ka dhigay, waxaana saxeexay Blaise Matuidi oo ka faa’iidaystay khalad uu sameeyey goolhayaha Madrid, Navas.
Labada kooxoodba waxay markaas kaddib sameeyeen dedaallo badan, waxaase u suurtogashay Real Madrid in loo dhigo rikoodhe daqiiqaddii 92aad ee dhamaadka ciyaarta, kaas oo uu gool u beddelay Cristiano Ronaldo.
Rikoodhaha ayaa waxa si ba’an uga mudaharaaday ciyaaryahannada Juventus, iyadoo kaadhka cas loo taagay goolhaye Buffon oo cadho is xakamayn kari waayey.